Ọrụ Quikr na India - Ọrụ na Mumbai - Ọrụ na Delhi
Ọrụ Quikr na Hyderabad, Mumbai na Chennai
Ọrụ na malaysia - Malite na ụlọ ọrụ gọọmentị
Ndị ọrụ ụgbọ elu Emirates - Bulite Bipụta Taa!
bipụtara Ụlọ ọrụ Dubai City at September 28, 2018
Ọrụ Quikr na India
Webụsaịtị Quikr Jobs maka a ọrụ n’India. Ị nwere ike emetụta ọtụtụ ọrụ ọrụ. Chọọ ọrụ dị mkpa maka profaịlụ gị. Companylọ ọrụ ọrụ Quikr nyochaa maka ndị na-achọ ọrụ ugbu a. Ma ugbu a, i kwesịrị ilebanye anya ezigbo ọrụ na Dubai. Shouldkwesiri ilele ọrụ anyị. Anyị na-enye ụzọ kachasị mma maka ọrụ n'ime Dubai. Anyị na-arụ ọrụ. Nke ahụ bụkwa eziokwu. Na Ụlọ ọrụ Dubai City bụ onye na - eweta ihe dị elu Ọrụ ndị Emirates. Dika odi, odi ugbu a na-enyere aka inweta ọrụ na mba ọzọ.
Ọrụ dị na UAE na Abu Dhabi dị mma maka ndị mba ọzọ. Buru nke a n'uche, anyị na - achọ inweta ndị ọrụ ọhụụ. Na United Arab Emirates ohere ha adịghị agwụ agwụ. Anyị na goro ya agha na mpaghara Gulf. Yabụ, ụlọ ọrụ anyị na-akpali ndị na-achọ ọrụ. Ọrụ ịnabata anyị na-enye nọ n'ọkwa dị elu.
Yabụ, ụlọ ọrụ anyị na-elepụ anya ime ka ị banye n’ime ụgbọ. Anyị na-enyere ndị ọrụ aka na mba ofesi. Nye ghọọ onye obula. Yabụ, Dubai City Companylọ ọrụ na-enye aka n'ịrụ ọrụ na Middle East. Ihe kachasị mkpa maka ndị otu anyị bụ jikwa profaịlụ nwa akwukwo. Firmlọ ọrụ anyị, na-ekwukarị, na-arụ ọrụ. N'ihi na anyị bụ ndị mmadụ si India na Pakistan na-emegharị ugbu a. Dị ka ihe dị mkpa maka ụlọ ọrụ anyị. N'ihi na anyị kwenyesiri ike na nke ahụ nyocha oru. Ọ bụ usoro dịịrị ndị ọrụ. Karịsịa na UAE. Yabụ, site na nke a n'uche, anyị ewetala nduzi maka expats.
Ị na-achọ ọrụ?
Anyị nwere ike inyere gị aka inweta ọrụ!
Ọrụ Quikr na India - Delhi, Mumbai, Bangalore
Companylọ ọrụ dị na Mpaghara India. Kpamkpam na-atụ anya ndị ọrụ ọzọ. Na otu n'ime ihe atụ bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọ bụla. Yana ụlọ ọrụ ego. Ọzọkwa, ọrụ ndị kachasị mkpa ị nwere ike inweta bụ site na Portal Quikr. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ kachasị na Forbes 500 bụ ezumike na Mumbai. N'ihi na Indian ahịa na-eto eto na Middle East na-aga n'ihu. A ga-achọkwa ndị ọrụ nwere ike ịkpa ike ke mme akwa obio man anam utom.
Mgbe ahụ, na-ekwukarị, ụlọ ọrụ ndị na-ewu ewu enweghị nsogbu ka inweta ndi n’acho oru. Companylọ ọrụ ahụ na-akwụ ụgwọ na-elekọta mmadụ. Ọmụmaatụ Quikr na Linkedin. Tinyere ebe a na-achota oru oru dika N'ezie na Naurki. Ya mere, ekwenyesiri ike na ụlọ ọrụ ahụ abụghị nke adịgboroja azụmahịa. Companylọ ọrụ anyị na-adụ ọdụ ike jiri ụlọ ọrụ a na-arụ ọrụ.
Hiring na Mumbai na Delhi!
Dubai City Company - Bulite CV Taa!
Abanye n'ọrụ Quikr na Middle East
Ohere kachasị mma maka ọrụ dị na mpaghara Ọwara. N'iburu nke a n'uche, anyị bụ na-enyere aka na UAE na Qatar. Ọzọkwa, anyị na-enweta arịrịọ ụfọdụ site na Kuwait na Bahrain. Ihe a niile ndụ nnukwu ahịa anyị nwere. N'aka nke ọzọ, anyị na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụkọ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ NaukriGulf, über na Jerry Varghese. Firmlọ ọrụ a bụkwa n'elu ụlọ ọrụ maka ndị na-achọ ọrụ. Otu n’ime ihe atụ nke ahụ bụ usoro ọrụ ha. Otutu ndi mmadu na acho ọrụ maka saịtị nrụọrụ weebụ a.
Yabụ, dabere na ahụmịhe ọkọlọtọ. Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ na-achọ inweta ụlọ ọrụ kacha mma. Ma isi ihe a, Naukri Portal bụ nke gị. Ka m were anya gị hụ nweta ọrụ n'ọdụ ụgbọ elu. Companylọ ọrụ a ghọrọ otu n'ime ndị kachasị mma maka gị. Na-ekwukarị, ụlọ ọrụ anyị na-akpali ndị na-ekwu okwu ọrụ. Firmlọ ọrụ a bụkwa na-ewe ndị ọrụ ná mba ọzọ.
Otu ezigbo isi ihe. Companylọ ọrụ a na-aga nke ọma n'ahịa India. Ọzọkwa, Enwere ọtụtụ edemede edemede banyere ụlọ ọrụ a. Na-ekwukarị, isi ihe dị na ya bụ profaịlụ ụlọ ọrụ. Ejiri ọkwa dị elu n'ịntanetị. Na n'ihi nha ha. Kwuwa okwu nnukwu nzukọ dịka Expo. N’ezie, ha nwere ike ijikwa ọrụ ị na-enye.
Na ndị ọrụ gburugburu ụwa. Chọta ụlọ ọrụ a dị ka saịtị ọrụ dị mma. Ka anyi che ya nche, ulo oru a na - aduputa ndi oru nke ndi India ikike. Ọzọkwa, nke ọhụrụ ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ ọhụrụ. na-enwe ike iji ha. Ya na ndi isi oru. Ingchọta ụgwọ dị ukwuu ọrụ nyere si Turkey. N’aka nke ọzọ, a na-emelite ọrụ ụbọchị ọ bụla. Otutu ndi mmadu si na uwa niile bia, dika ima atu. expires si Sri Lanka. Ọzọkwa, India na United Arab Emirates. Yabụ, ọrụ ịchọ ọrụ ọhụụ nwere nnukwu ohere iji nweta echiche ọrụ na ha.
Companylọ ọrụ a na-ezipu ozi Ọrụ 30,000 na-enye kwa ụbọchị. Ruo ugbu a na-emelite ụbọchị ahụ. Ọzọkwa, ndị ọhụrụ si n'akụkụ ụwa niile ikenye CV ebe ahụ. Dịka ọmụmaatụ ndị na-achọ ọrụ Indian. Naanị ị na-asọfe. Yana Pakistani na mba ofesi. Na mkpokọta, na-ekwu okwu, Nzipu Resume ha nweghachi ụlọ ọrụ a. Ya mere ụlọ ọrụ a n'enye ezi oru n’India?. Mba, ha na-enwe ọrụ na Dubai na expats ụwa dị njikere ịga. Ọbụna ị nwere ike ịrụ ọrụ n'ime ime ma bụrụ onye na-ede blọgụ na Dubai!.
Kedu ihe mere m ga eji jiri ebe nrụọrụ weebụ Quikr?
Otu isi ihe kachasị mma, na-ekwu okwu n'ozuzu ya ụzọ ọrụ. Na maka nguzosi ike a, ị nwere ike ịbụ ọnụ ahịa bara uru. Akụkụ dị mma bụ na ị nwere ike nweta ọrụ ngwa ngwa. Na otutu nke India maara nka. N’ebe obula I si bia. Na-ekwukarị, ị nwere ike nweta ya n'ụzọ mara mma nke ukwuu. Na n'ezie nke ukwuu ngwa ngwa karịa saịtị ọrụ ndị ọzọ.
Citylọ ọrụ Dubai City n'aka nke ọzọ, na-arụ ọrụ na ezigbo post blog ga - eduzi gị banyere Dubai. Na-ekwukarị, Anyị na-eziga ozi isiokwu banyere ndụmọdụ na Dubai yana otu ụlọ ọrụ ndị ọzọ si dị ukwuu. Yabụ, ndị ọrụ ọhụụ na-achọta uru na ọrụ anyị. Knowingmara na anyị dị mma site na itinye ebe kụrụ maka ọrụ. Ọzọkwa, anyị na-eme ya n'ihi anyị kwenyere na UAE. Karịsịa maka Dubai na Abu Dhabi. Simplezọ kachasị mfe bụ ụzọ kachasị mma iji mee ihe. Ma n’ihi otu ụlọ ọrụ a si arụ ọrụ. Bụ onye na - eweta ụlọ akwụkwọ sekọndrị maka ohere.
Nchọpụta ọrụ gị na-achọpụta na ebe nrụọrụ weebụ na-akwụ ụgwọ
Na-ekwukarị, anyị na-akwado maka ohere kachasị mma maka expats. Onye isi nchịkwa mmadụ na UAE. Na-akpali mgbe niile, na-ekwukwa nke ahụ onye ọ bụla ọrụ Findker emi odụn̄de ke India. Inwe ohere iji soro ha rụọ ọrụ. Firmlọ ọrụ anyị ahụlarị etu ụlọ ọrụ a si arụ ọrụ. A dikwa anyị ọdụ ka anyị soro ha rụọ ọrụ. Na-ekwu okwu n'ozuzu ya. India na Ahịa UAE na-eto. Ndi mmadu ohuru ndi choro ibi na oru na Dubai. Kwesịrị ịhapụ ụlọ ọrụ anyị CV. Na kwesịrị maa bulite a malitegharịa a onye nlekota oru.
Ọrụ Quirk dị ugbu a nọ n'elu. Ma ụlọ ọrụ a bụ nnukwu ọrụ na India. Karịa 160,000 ndị na-achọ ọrụ na-achọ ha na ọrụ crypto na ha!. N'ikwu eziokwu, ọ nweghị ụzọ ụlọ ọrụ ọzọ ga-esi rụọ ụlọ ọrụ a. Naanị n'ihi na na-eru ọkwa rue MBA. Ọ bụ ogologo oge ọrụ ụlọ ọrụ.
Yabụ, ọ bụrụhaala biputere profaịlụ gị emelitere. Ị nwere ike nweta ọrụ ngwa ngwa karịa ka o kwere omume. N'akụkụ aka nke ọzọ, ma ọ bụrụ na i si mba ọzọ na-abịa na-achọ ezigbo onye ọrụ na India. Na-ekwukarị, ị ga-edebanye nkọwa gị.
Ọzọkwa, ị nwere ike ichere maka ozi ndị ọzọ. Buru nke a n'uche bidoghachite ma bipiti na saiti India ha. Naanị chere maka oru ohuru n’enye gi ibanye na emai gil.we ejighi n’aka ma ọ bụrụ mbanye maka ọrụ na Dubai. Ga-ekwe omume na Quirk ọrụ webụsaịtị.
Ndị ọrụ India na-aga ọrụ ọhụrụ. Ebe ọrụ Quikr na-etinye ha. N'akụkụ dị mma, ọ ga-aba uru ị gaa bulite CV. Ọrụ ọhụụ na-eto elu, yabụ na ị maghị mgbe enwere ike itinye gị.